Kheyre “Waxaa isku dayayaa inaa soo dhiso dowlad ka tartumeysa shacabka oo dhan..” (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Kheyre “Waxaa isku dayayaa inaa soo dhiso dowlad ka tartumeysa shacabka oo dhan..” (DHAGEYSO)
Ra’iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa aqbalay xilka loo magacaabay, isagoona dhinaca kale madaxweynaha uga mahad-celiyay xilkaan cusub ee uu u magacaabay.
“Mudane madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo, marka hore waxaan kaaga mahad-celinayaa sida sharafta leh ee aad iigu magacawday xilka culus ee ra’iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waan kaa qablay, waxaana aad ugu faraxsanahay in anigoo ku faraxsan waajibaadka dadkayga iyo dalkeyga iga saaran inaa si hufan kuula shaqeeyo” Sidaas waxaa yiri ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ballan ku qaaday in xilka loo magacaabay uu uga soo bixi doonno sidii loogu aaminay, islamarkaana markii uu baarlamaanka ansixiyo soo jeedinta madaxweynaha uu sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo dhisi doonno xukuumad tayo leh oo ka tarjumeeysa shacabka Soomaaliyeed.
“Waxaan isku dayayaa in marka golaha shacabka ee baarlamaanka uu ansixiyo soo jeedinta madaxweynaha, inaan sida ugu dhaqsaha badan kusoo magacaabo dowlad ka tarjumeysa shacabka oo dhan, iyo hadafyada uu madaxeynuhu bal-balaariyay, anigoo la tashan doonno guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha” Ayuu hadalkiisa raaciyay ra’iisul wasaare Kheyre.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay la shaqeeyaan xukuumadda uusoo dhisi doonno, si buu yiri dalka Soomaaliya uu uga baxo dhibaatada iyo colaadaha horumarka dalka dib u dhigay.
Ugu dambeyntii, wuxuu ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre sheegay inuu hore ula soo shaqeeyay hay’addo kala duwan oo gudaha iyo dibadaba ah, islamarkaana ilaalin doonno amaanadda loo dhiibtay.
“Waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto oo ay dunidda ka joogaan ka codsanayaa inay nagu gacan siiyaan sidii aan waajibkaan culus u gudan laheyn, annagoo isku dayi doonna sida cadaaladda ugu haboon tahay inaan waajibkaan u gudan doono, waxaana hore ula soo shaqeeyay hay’addo kala duwan oo gudaha iyo dibaddaba ah” Ayuu ra’iisul wasaare Kheyre hadalkiisa kusoo gaba-gabeeyay.